मलाई कमेडी मन पर्छ : आँचल शर्मा - नारी
म्युजिक भिडियोहरू त थुप्रै छन् । नयाँ कमेडी फिल्म दाल, भात–तरकारीमा समेत व्यस्त छु ।
शत्रु गतेपछि फेरि कमेडी चलचित्रमा देखिनुको कारण ?
मलाई कमेडी एकदम मन पर्छ । कतिले त मलाई कमेडियन नै भन्छन् । सबैको कुरा सुन्दा म पनि राम्रो कमेडी गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ क्यारिकेचर गर्न खोज्छु । धेरैले ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहन्छन् को क्यारिकेचर रुचाउनुभयो । म रुवाउने, हँसाउने जस्तो पनि अभिनय गर्न सक्छु ।
जसको कथाले मलाई तान्छ । म त्यसमा अभिनय गरिहाल्छु ।
कस्तो चलचित्रमा अभिनय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
महिलाप्रधान चलचित्रमा काम गर्न मन छ । नेपालमा महिलासम्बन्धी थुप्रै कथा छन् । तिनलाई दर्शकमाझ सन्देशपूर्ण हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । मलाई त्यस्ता वास्तविक कथामा आधारित चलचित्रमा अभिनय गर्न मन छ ।
सानोमा के बन्छु भन्ने थियो ?
नायिका त अडिसन दिनेबित्तिकै अचानक भएँ । वास्तवमा म वकिल बन्न चाहन्थेँ । अझै पनि त्यो सपना कायमै छ । मास्टर भर्खरै सकियो, हेरौं ? चलचित्रमा त मलाई भन्दा बहिनीलाई रुचि थियो ।
त्यसो भए एकपछि अर्को चलचित्र किन त ?
मैले कहिल्यै नायिका हुन्छु भन्ने सोचेकी थिइन । यद्यपि चलचित्रमा अभिनय गरेपछि अभिनयको लत लाग्दो रहेछ । राम्रो कथा र टिम आयो कि नाइँ भन्नै नसकिने ।
तपाईंका सबैभन्दा प्यारा व्यक्ति को हुन् ?
मेरो बुवा, बुवा नै मेरो वेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ । म हरेक निर्णय बुवाकै सल्लाहमा लिन्छु । कुनै चलचित्रको अफर आएको छ भने पनि साइन गर्नुअघि बुवालाई स्क्रिप्ट सुनाउँछु । म कुनै पनि काम बुवाको चित्त दुखाएर गर्दिन ।